Zezikomiti Babulala Abaqondisi-Mthetho Isemthethweni Thelekisa Umthetho Library
Inkcazelo kuba zezikomiti babulala kwenzeka xa oyedwa ingaba i-ukuthelekisa locwangciso ukuba ukuzithwala ngaphandle a babulala okanye killing ngomnye kwaye iqalisa a substantial inyathelo lesi-kwiintlanganiso ikomishoni ukuba killing. I-ulwaphulo-mthetho zezikomiti babulala iya kuba wanikela nkqu nangona ukuthelekisa killing akazange yenzekile, kwaye defendant ayiphumelelanga uzalise ulwaphulo-mthetho. Abanye states uza kwentlawulo a defendant kuba zezikomiti babulala nkqu ukuba defendant kokuba i-buchule ukuba benze ukubulawa kwaye waqala komhlaba ukuba benze i-ulwaphulo-mthetho. Ngokuba umzamo yolwaphulo-mthetho asoloko engagqitywanga ngenxa yokuba ukuthelekisa ulwaphulo-mthetho ziphantsi elifutshane, nokumisa yokokuba umntu kokuba i-mindset ka-ukugqibezela intended ulwaphulo-mthetho ubizwa engundoqo kwinto ukukhusela a conviction.
Ukuba abe convicted ka-zezikomiti babulale, abatshutshisi kufuneka bakwazi kuvavanya: ezi Zilandelayo jikelele guidelines, ebhekisa i gun e umntu avume eyiyo zezikomiti babulala kodwa firing i gun, nkqu ukuba wena musa betha kubo, ingaba mhlawumbi kuba zezikomiti babulala. Zezikomiti babulala unako kanjalo kuba ibe igcwalisiwe kuba uzama ukubetha umntu neqabane lakho imoto okanye profoundly wounding umntu kwaye ndimke kubo kuba wafa ngoko ke ixesha elide njengoko yakho injongo yaba babulala. Njenge babulale, zezikomiti babulala unako zohlulwe kwi-seriousness kwaye izohlwayo esekelwe phezu imibandela ethile. Ezi imibandela ngala: Izivakalisi kuba zezikomiti babulala vary ukusuka urhulumente imeko kodwa extenuating iimeko unako yandisa ubude bexesha a isivakalisi exponentially. Eqhelekileyo izivakalisi kuba zezikomiti babulala unako aqala kwi- eminyaka nangona kunjalo, kukho oftentimes njengokukhapha imirhumo kwaye iimeko ukuba tie kwi zezikomiti babulala njenge felonious assault, mthethweni gun ulawulo, kwaye ubuhlungu ye-attack. Phantsi, ulwaphulo-Mthetho Nzame Act ka, zezikomiti babulala ufumana i-indictable offense apho carries a ubukhulu esangezelelweyo ubomi entolongweni.
Ubomi imprison kuba zezikomiti babulala ayikho unheard ka na Maryland meko ngokuchasene Carlos Ovalle
Ukususela zezikomiti babulala yi uhlobo homicide kwentlawulo, defenses ukuya homicide kwentlawulo uya rhoqo umsebenzi kwi-i-zezikomiti babulala ngaphandle kwentlawulo. Ukuba abo defenses aren khange satisfying, zezikomiti babulala kwentlawulo kusenokuba disproven yi-negating na ezibini, efunekayo ukuze proving i-zezikomiti babulala: engundoqo kwinto ukuze ubani abe negated ingaba defendant ke mindset kwaye buchule. Ukuba defendant kuphela intended ukuba benze kwenzakala okanye ezinzima ngokwasemalini, kodwa zange kubekho i-ethile locwangciso ukubulala, ngoko ke defendant ayisayi kuba convicted ka-zezikomiti babulala ngaphandle kokuba umntu ngokwenene uyafa ukusuka defendant ke reckless mthetho. Iindlela ka-gradation vary ukusuka kwesinye isimo ukuya elandelayo kodwa ukuba ufuna ahlawulelwa kunye zezikomiti babulala kunokuba kufuneka ngoko nangoko udibane zolwaphulo mthetho lawyer ngubani abantu abaqhelekileyo kunye imeko yakho kwaye khawunti imithetho kwaye inkundla nemigaqo-nkqubo
NOTARY KARHULUMENTE KWI-INTANETHI KUBA FREE